मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश ः ओली « Loktantrapost
मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश ः ओली
२५ मंसिर २०७४, सोमबार १५:११
भद्रपुर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाम गठबन्धनलाई बहुमतको जनादेश दिएकोमा नेपाली जनतालाई धन्यबाद दिदै मुलुक अब नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।
ओलीले आज दिउँसो भद्रपुरस्थित मेची रङ्गशालामा बाम गठबन्धन आयोजना गरेको विजय सभालाई सम्बोधन गर्दै त्यस्तो बताएका हुन् ।
चुनावबाट प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई नआत्तिन आग्रह गर्दै उनले विपक्षीप्रति गठबन्धनको सरकारले कुनै भेदभाव नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफु लोकतन्त्र र जनताका लागि लड्दै आएको स्मरण गराउँदै सबै मिलेर मुलुक बनाउने अभियानमा सघाउन प्रतिपक्षलाई समेत आह्वान गरे ।
‘देशलाई हाँक्ने गरी अघि बढिरहेका छौँ, पराजय भोगिरहेका साथीहरुले समेत केही चिन्ता लिनु पर्दैन’, ओलीले भने–‘म आफ्ना निम्ति होइन, जनताका लागि र लोकतन्त्रका लागि लडेको मान्छे हुँ,अर्को पार्टीका हौँ भन्ने विर्सिदिनुहोस् ।’
परिवर्तनका लागि राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिको चक्र पूरा भएको उल्लेख गर्दै उनले अब मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धिको लहर सिर्जना गरिने बताए ।
आम जनताले परिर्वतनको अनुभूत गर्ने गरी आगामी सरकारले काम गर्ने बताउँदै उनले नेपालीका छोराछोरीले मेनपावरमा नाम लेखाउन लाम लाग्नु पर्ने अध्यायको अब अन्त्य हुने विश्वास दिलाए ।
उहाँले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरिने र मुलुकबाट गरीवीलाई केही वर्षभित्र्र विदा गरिने बताउँदै उनले भने–‘केही वर्षमै मेनपावरहरुको हालत ग्राहक नआउने पसलको जस्तै हुन्छ ।’
जातजातिका विच सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै अबको सरकार अघि बढ्ने जनाउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचार र गुण्डागर्दी नसहने र कानूनी शासनको प्रत्याभूति गरेरै छाड्ने भरोसा दिलाएका छन् ।
राजधानीबाट विजय सभामा सरिक हुन आज विहान झापा आएका ओली बाम गठबन्धनले झापामा आयोजना गर्ने विजय र्यालीमा समेत सहभागी भएका छन् ।
भद्रपुरको विजय सभामा झापा क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन र झापा क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा माओबादी केन्द्रका पोलिट्व्यूरो सदस्य सुरेन्द्रकुमार कार्कीले समेत मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए ।
नेकपा एमालेका झापा अध्यक्ष चिन्तन पाठकले सञ्चालन गरेको विजय सभामा झापाबाट प्रतिनिधि सभा र प्रददेश सभामा विजयी सबै सांसद र गठबन्धन दलका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
विजय र्याली रङ्गशालाबाट सुरु भएर ज्यामिरगढी हुँदै धुलावारीतर्फ अघि बढेको छ भने विर्तामोड, सुरुङ्गा र दमकमा नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको झापा क्षेत्र नं. १ को प्रदेश–२ बाट निर्वाचित सांसद् गोपाल बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् ।
धुलावारीको पश्चिम बस स्टेन्ड नजिक खुला ठाउँमा गठबन्धनको सभाका लागि मञ्च सजाइएको छ ।